Libertya ERP waxay soo bandhigaysaa qaabkeeda 14.02. Barnaamijka Maareynta Maamulka oo dhameystiran | Laga soo bilaabo Linux
Hadal haynta | | Aplicaciones
Libertya ERP Waa Software Maareynta Maareynta Maareynta ah, oo lagu horumariyey gebi ahaan liisanka Software-ka Bilaashka ah, ee aysan lahayn xannibaadyada hawlgalka ama liisanka ama cusboonaysiinta kharashyada.
Libertya ERP waxay dabooleysaa dhammaan baahiyaha maamul iyo xisaabeed ee shirkadeed iyada oo loo marayo wareegtooyin loogu talagalay in lagu dheellitiro fududaanta adeegsiga iyo dabacsanaanta nidaamka. Astaamaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah:
Hawlgalka Iibka iyo Xisaabaadka La Heli Karo
Alaab-qeybiyeyaasha iyo xisaabaadka la bixin karo
Diiwaanka alaab-qeybiyeyaasha iyo macaamiisha
Nooca 14.02 wuxuu soo bandhigayaa ka mid noqoshada Macmiilka Webka taas oo u oggolaanaysa marin u helka nidaamka kombiyuutar kasta oo ku xidhan internetka. Macaamiisha desktop-ka dhaqameed iyo ikhtiyaarka websaydhku hadda way wada nool yihiin; taas oo suurtogal ka dhigeysa in lagu soo qoro arjiga midkoodna, xitaa isku mar.
Sidan oo kale, iyo mahadsanid taageerada dhammaan bulshada adeegsadayaasha iyo horumariyeyaasha, Libertya ERP had iyo jeer way sii kordheysaa iyada oo ku saleysan falsafadeedda u gudbinta 100% ee shaqadeeda iyada oo ah gebi ahaanba software bilaash ah, iyada oo aan xaddidneyn hawlgal ama liisan qarsoodi ah; sidoo kale bixinta dabacsanaan rakibaadda oo aan caadi ahayn oo u oggolaanaysa in laga hirgeliyo suuqa shirkadaha iyo suuqa SME, iyadoo lala socdo sheekooyinka guusha ee labada qaybood.
Libertya ERP hadda waxay leedahay shabakad muhiim ah oo lala-hawlgalayaal idman oo la aqoonsan yahay: Argentina, Uruguay, Venezuela, Mexico iyo Spain.
Si aad wax badan uga barato Libertya ERP oo aad u soo dejiso nooca cusub:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Libertya ERP waxay soo bandhigaysaa qaabkeeda 14.02. Comprehensive Maamulka Maamulka Software
Ma jiraan kuwo wanaagsan oo leh apache, php iyo mysql oo aan ka ahayn fusioninvoice?
Waa inaan hirgaliyaa Dolibarr, waligay ma aanan isticmaalin laakiin waxaan ka helay fudaydkeeda rakibida iyo isku xirnaanta saaxiibtinimada ah, waa 100% shabakad waxayna la shaqeysaa php, apache iyo mysql. Aad ayaan u fiicanahay waan fuliyay http://www.ojuridica.cl. Dabcan anigu uma helo dukumiinti badan maamulayaasha
Waxaan ku biirayaa su'aasha, waxaan raadinayaa wax si cadaalad ah u qumman oo biil ah taasna waxay ku hoos jirtaa GNU / Linux ama nooca Is-martigelinta (Fusioninvoice…).
Ku jawaab Izenzo
Jawaab Gonzalo Murillo
Ma faallo ka bixin kartaa sababta? Waxaan haystay tixraacyo aad u wanaagsan.
Ma taqaanaa wax CRM ama ERP ah oo ii oggolaanaya inaan isbeddel ku sameeyo heerka qaab dhismeedkiisa, tusaale ahaan haddii aan doonayo inaan beddelo aqoonsiga xogtaada oo aan soo saaro qaybo ka kooban. Talooyin kasta waa la qadarinayaa.
Furan Luqadda loo isticmaalo in lagu qoro modules waa Python
Barnaamij weyn oo ay kugula talinayaan boggan. Sidoo kale, waxaan jeclaan lahaa inaan muujiyo si loogu guuleysto barnaamijkan ama barnaamijyada kale waa inaan lahaanaa shirkad wanaagsan oo nagala talinaysa oo tilmaamaysa tan ugu fiican shirkadeena, oo aan u barnaamij u samaynno.
Shirkadahaas dhexdooda ayaan ka iftiimin karaa oo kula talin karaa http://www.cimatic.com.mx
Salaan iyo bogaadin boga
Laptop-kaaga miyuu la jaan qaadi karaa GNU / Linux?